fanontaniana Flight Factor Airbus A350-900 XWB
2 taona 2 volana lasa izay #303 by Colonelwing
Ho an'ireo izay mitady zavatra toa tsara sy tena tsara natao A350 ao amin'ny payware fomba.
Tsy fantatro aho na inona na inona momba izany entana ,, fa avy izay efa no namaky amin'izany Review ,, dia toa lehibe.
Ny safidy ,, toy ny tsy manana fifandraisana akaiky amin'ny ny vokatra miresaka momba ambony.
Mety misy olona afaka mameno ary miresaka momba izany intsony ,, dia aza misalasala ny manao izany Gentelmen ...
2 taona 2 volana lasa izay #304 by Dariussssss
Fiaramanidina toy ity iray ity dia ataovy ho Sims hafa, toy ny P3D sy X-Plane ....
2 taona 2 volana lasa izay #315 by JanneAir15
Izany no mijery tsara Heveriko ary afaka mahazo fa satria nitady ho tsara koa A350 ary mihevitra aho fa io no iray ihany koa aho, fa mitady ny tsara A380. Afaka olona manoro hevitra ahy azafady raha fantatrao tsara Airbus A380 ny fahafahana hanampy liveries koa. Efa namorona lohahevitra antsoina hoe "Fiaramanidina tolo-kevitra" Koa raha manana soso-kevitra ny A380 Masìna ianao, lazao amiko.
2 taona 2 volana lasa izay - 2 taona 2 volana lasa izay #321 by Colonelwing
Nice safidy fa Airbus A350-900 XWB Janne ,, tsarovy dia ho XPlane, ary tsy mbola for FSX
Fotsiny ho azo antoka befort fividianana ianao XPlane Sim ...
Tsy misy ny tsy Heveriko fa mahavariana fa na dia tsy iray fampisehoana officical kevitra navoaka mbola Flight Factor nahavita ny misintona azy avy ka nanjary tanteraka believable A350 ho an'ny X-fiaramanidina. Aho miandrandra ny manaraka ny vaovao farany ity aicraft. Manontany tena aho tamin'ny taona izay ny FSX / P3D mpampiasa dia ho afaka manidina ny Airbus A350.
Fanovana farany: 2 taona 2 volana lasa izay Colonelwing.
2 taona 2 volana lasa izay #323 by JanneAir15
Salama! Misaotra anao noho ny fanazavana satria FSX aho fa misy A350 avy Aerosoft izay ho an'ny FSX.
Teny an-dalana no anarako Janne (tsy Jeanne), izaho anefa mbola tsy vehivavy!
2 taona 2 volana lasa izay #324 by Colonelwing
Dia miala tsiny ,, vaovao no nanitsy ...
Fotoana mamorona pejy: 0.215 segondra